डिफेन्डिङ च्याम्पियन पोर्चुगल र विश्व नं. १ बेल्जियमबीच महाभिडन्त, कसले मार्ला बाजी? | सबै खेल
डिफेन्डिङ च्याम्पियन पोर्चुगल र विश्व नं. १ बेल्जियमबीच महाभिडन्त, कसले मार्ला बाजी?
१३ असार २०७८, आईतवार ०१:२५
युरोकपको डिफेन्डिङ च्याम्यिन पोर्चुगल र फिफा वरीयतामा विश्वका नम्बर १ टिम बेल्जियम नकआउट चरणको पहिलो खेलमै आमनेसामने हुँदैछन्। प्रतियोगिताका दुई प्रबल दाबेदार टिमबीचको यो महाभिडन्तलाई विश्वभरका फुटबलप्रेमीहरुले विशेष चासोका साथ नियालिरहेका छन् भने व्यग्रताका साथ प्रतिक्षा पनि गरिरहेका छन्।
यी दुई टिम जारी युरोकपमा सर्वाधिक गोल गर्ने टिम पनि हुन्। दुवै टिमले समूह चरणमा समान ७ गोल गरेका छन्। बेल्जियम समूह चरणका आफ्ना तीनवटै खेल जित्दै समूह विजेताका रुपमा प्रिक्वार्टरफाइनलमा प्रवेश गरेको हो।
तर, प्रतियोगिताका सर्वाधिक गोलकर्ता क्रिस्टियानो रोनाल्डोको ५ गोलको मद्दतमा ७ गोल गरेको पोर्चुगल भने एउटा मात्र जित हात पार्दै समूहको तेस्रो स्थानमा रहँदै जसोतसो नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको हो।
समूह चरणमा बेल्जियमको प्रदर्शन
बेल्जियमले समूह चरणका तीन खेलमा आफ्नो अट्याकीङ पावर देखाइसकेको छ। पहिलो खेलमा रुसलाई ३–० ले पराजित गरेको बेल्जियमले दोस्रो खेलमा डेनमार्कविरुद्ध १–० ले पछाडी परेको अवस्थाबाट कमब्याक गर्दै २–१ को जित निकालेको थियो भने अन्तिम खेलमा फिनल्यान्डलाई २–० ले पराजित गर्दै नकआउटमा दमदार उपस्थिति जनाएको थियो।
रुसविरुद्धको खेलमा रोमेलु लुकाकुले २ गोल गरेका थिए भने थोमस म्युनिअरले पनि १ गोल थपेका थिए। जारी युरोकपमा लुकाकुले ३ गोल गरिसकेका छन्। उनको तेस्रो गोल भने समूह चरणको तेस्रो खेलमा फिनल्यान्डविरुद्ध आएको थियो। ८१औं मिनेटमा लुकाकुले गोल गर्नुअघि बेल्जियमले ७४औं मिनेटमा लुकास रेडेकीको आत्मघाती गोलमा अग्रता लिएको थियो।
बेल्जियमको दोस्रो खेल भने अझ रोमाञ्चक थियो। दोस्रो मिनेटमै डेनमार्कका युसुफ पल्सेनले गोल गरेपछि बेल्जियम पछाडी परेको थियो। सुरुमै पछाडी परेपछि बेल्जियमले युरोकपको इतिहासमा कहिल्यै जित निकाल्न सकेको थिएन।
तर, दोस्रो हाफमा सब्स्टिच्युटका रुपमा मैदान प्रवेश गरेका केभिन डे ब्रुनले फिनल्यान्डविरुद्ध नयाँ इतिहास कोरे। डे ब्रुनले एक एसिस्ट र एक गोल गर्दै बेल्जियमलाई कमब्याक जित दिलाए। उनको एसिस्टमा पहिलो गोल थोर्गन हजार्डले गरेका थिए।
समूह चरणमा पोर्चुगल
डिफेन्डिङ च्याम्पियन पोर्चुगलले पहिलो खेलमा हंगेरीलाई ३–० ले पराजित गर्दै यसपटकको युरोकपमा पनि आफ्नो बलियो दाबेदारी प्रस्तुत गरेको थियो। स्टार स्ट्राइकर रोनाल्डोले दुई गोल गर्दै पोर्चुगललाई प्रभावशाली सुरुवात दिलाएका थिए।
तर, दोस्रो खेलमा भने पोर्चुगलले अर्को दाबेदार जर्मनीसँग लज्जास्पद हार बेहोर्न पुग्यो। रोनाल्डोले गोल गर्दै पोर्चुगललाई सुरुवाती अग्रता दिलाएपनि जर्मनीले उल्लेखनिय कमब्याक गर्दै ४–१ को शानदार जित निकाल्न सफल भएको थियो।
युरोकपको ग्रुप अफ डेथमा परेको पोर्चुगलले तेस्रो खेलमा विश्व च्याम्पियन फ्रान्सको सामना गरेको थियो। फ्रान्सविरुद्ध रोनाल्डोले दुई गोल गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा सर्वाधिक गोल गर्ने रेकर्ड बराबरीको कीर्तिमान राखेपनि पोर्चुगललाई जित दिलाउन भने सकेनन्।
फ्रान्सका लागि रोनाल्डोकै रियल मड्रिडमा छँदाका टिममेट करिम बेन्जेमाले पनि दुई गोल फर्काउँदा खेल बराबरीमा सकिएको थियो। सर्वाधिक ७ गोल गरेपनि ३ खेलमा १ जीत, १ हार र १ बराबरीको निकालेको पोर्चुगल आफ्नो समूहको तेस्रो स्थानमा सिमित भएको थियो।
तर, तेस्रो स्थानमा रहने उत्कृष्ट बन्दै उसले नकआउटमा स्थान सुरक्षित गर्न भने सफल भयो। जससँगै पोर्चुगलको यसअघि नै समूह ‘बी’को विजेताका रुपमा अन्तिम १६ मा पुगिसकेको बेल्जियमसँगको महाभिडन्त निश्चित गरेको हो। यो पोर्चुगल र बेल्जियमबीच युरोकपमा हुन लागेको पहिलो भिडन्त पनि हो।
पोर्चुगल भर्सेस बेल्जियम हेड टु हेड
युरोकपमा मात्र होइन कुनैपनि मुख्य प्रतिस्पर्धामा यी दुईबीच हुन लागेको यो पहिलो खेल हो। यद्यपी, यसअघि अन्य अवसरमा भने यी दुईबीच थुप्रैपटक एकआपसमा भिडिसकेका छन्।
युरोकप छनोटमै पोर्चुगल र बेल्जियम ६ पटक आमनेसामने भएका छन्। पछिल्लोपटक २००८ को युरोकप छनोटमा भिँड्दा रोनाल्डोको दुई गोलको मद्दतमा पोर्चुगलले लिस्बोनस्थित घरेलु मैदान ४–० को एकतर्फी जित निकालेको थियो भने ब्रसेल्समा भएको भिडन्तमा पनि २–१ को जित हात पारेको थियो।
समग्रमा पोर्चुगल र बेल्जियमबीच १८ खेल भएका छन्। जसमध्ये ६ खेलमा पोर्चुगल विजयी भएको थियो भने ७ वटा खेल बराबरी हुँदा बेल्जियमले ५ वटामा जित हासिल गरेको थियो। १८ खेलमा पोर्चुगलले बेल्जियमविरुद्ध २१ गोल गर्न सफल भएको थियो भने बेल्जियमले पोर्चुगलको पोस्टमा २२ गोल गरेको छ।
Tags: belgium, de bruyne, Euro cup 2020, portugal, ronaldo
गोल्डेन बुटमा रोनाल्डोको दाबेदारी, लुकाकु र सिक पछ्याउँदै
श्रीलंकाविरुद्धको टि–२० सिरिजमा इंग्ल्यान्डको क्लिनस्विप